Scleroderma Kuhunyushelwe - Inesici yezimonyo hhayi kuphela ...
Scleroderma - isifo kabani izimbangela kungukuthi ngokugcwele. Kunemibono eminingi ukuvela kwalesi sifo. Kodwa-ke Kuyaphawuleka ukuthi eziyinhloko abangela isifo kukhona izifo ezithathelwanayo (umalaleveva, umphimbo obuhlungu, umkhuhlane, isifo sokusha kwesibindi, ugcunsula), hypothermia isikhathi eside (e isakhiwo yezandla abantu, isibonelo), ukuhlukumezeka (ngokomzimba nangokwengqondo), izinguquko endocrine.
Scleroderma kukhawulwe (scleroderma yenziwe yaba yasendaweni), ezivamile (scleroderma letindzala), futhi kuxutshwe. Lesi sifo kungavuka bobudala kodwa ngokuvamile kubonakala abesifazane emva kweminyaka engu-30. scleroderma Kuhunyushelwe, ngokungafani uhlelo, kuthinta kuphela isikhumba ngesikhathi kwezinyathelo ezathathwa kungenzeka iphele yokutakula. Uhlelo olufanayo - ifomu kakhulu lesi sifo, lapho kuthinta emaphashini, inhliziyo, emphinjeni nezinso. Iziguli ezinjalo ziphathwa esibhedlela.
scleroderma yenziwe yaba yasendaweni Kwenzeka ngendlela zingcwecwe ezinobukhulu obuhlukahlukene nomumo ezingase zivele noma iyiphi ingxenye yomzimba. Okokuqala, kukhona izindawo onsomi-ebomvu noma pink-purple, okuyinto isikhungo iba eliphaphathekile futhi ohlangene ne isikhathi. Kulesi sigaba yesifo indawo uhamba uqwembe kokuba palely ophuzi umbala (amazinyo endlovu), isikhumba iphethini kwalo kulahleka, ebusweni iba bushelelezi, waxy. izindawo ephakeme umonakalo yoma (nciphisa), nozwela isikhumba ilahlekelwa kuyaqina bese kuba sengathi mncane izicubu paper. Yena akakwazi ujuluke kanye saloootdeleniyu, kanye izinwele kuso ayibi. Lezi zimpawu zingase zithathe isikhathi kunesikhathi eside - izinyanga noma ngisho neminyaka. Khona-ke amabala isikhungo ithambisa futhi kukhona yoma ukusuka endaweni yenhlekelele nge nokucwila.
ukuqina kwamathishu Plaque iyona ifomu evamile scleroderma eqondile. Lesi sifo iqala neqiniso ukuthi isikhumba livela indawo bluish ngaphandle uphawu express. Kancane kancane uphendulela eliphaphathekile; ingxenye APC onomfutho, ngezinye izikhathi ukufinyelela kwabantu bok. Isikhumba kule ndawo livele libe mhlophe olumhlophe-yellow noma ibe ubuchule. Azungeze foci sclerosis ukubonwa abarimi onsomi. Ngezinye izikhathi, ukuqina isikhumba siyenzeka, kodwa ezimweni eziningi wenabisela kumuntu ka 1-2 cm ukujula. Kwasendaweni koqweqwe scleroderma ngokuvamile kwenzeka ezindaweni obala ukuhlukumezeka enkulu. Yokutakula kubonakala ukunyamalala kancane kancane emasongweni onsomi futhi ukunciphisa isikhumba uphawu isibanda displaceable izicubu. Ngezinye izikhathi sclerosis patchy sihamba engabonwa.
scleroderma okwasendaweni: ukwelashwa
yokwelashwa okuphumelelayo yokuqina kwamathishu ebalulekile kuxhomeke endleleni lesi sifo saqala, futhi ukusebenza kwemithi. Okokuqala, kufanele ukuqeda foci ukutheleleka. Kulokhu, kungcono ukusebenzisa yokugcoba ngama-corticosteroid. Esimisiwe inkambo imijovo ye-penicillin futhi abanye izifundo - lidazy (ithambisa kahle ezicutshini). Ukwelapha sihlanganisa edonsa Vitamin amalungiselelo, ezithinta kahle imithambo yegazi nemithambo ye-capillary.
Ngemva kwenqubo acute isuswe, ukwenzangcono usizo Physiotherapy (phonophoresis, isibonelo), Physiotherapy, udaka balneotherapy (coniferous kanye Radon okugeza). zokugeza coniferous zingelashwa ekhaya, okwenezela okugeza ukwenziwa conifer inaliti akhiphe (noma ukwenziwa zikaphayini izinaliti eqoqwe mathupha). Emva amanzi okugeza Kunconywa ukusebenzisa izingosi abathintekayo cindezela ichthyol wamafutha noma Aloe juice. Inqubo ubonakala kahle kwenziwa ebusuku, ukulungisa ngebhandeshi cindezela (Kunoma yikuphi, hhayi band zokwelapha: kungaba kuvuse ukusabela iguliswa, kulandele ukusabalala kwezifo isikhumba).
scleroderma Kuhunyushelwe angashiya isici yezimonyo for a lifetime. Ngakho-ke, nokuvinjelwa kwezifo (ngaphandle izici letsintsa, ukuqina okuphusile umzimba) noma ukuqapha esihleliwe yayo evele isigula ukuvimbela Ukuphinda futhi ukwelashwa yesondlo kukhona ezibaluleke kakhulu. Ukudebeselela lokhu akunakwenzeka.
Breathing izivivinyo samakhaza: ukusetshenziswa yokuzijwayeza
Ulwazi olubalulekile kubo bonke: izimpawu chlamydia kwabesifazane
Izimpawu epicondylitis we ngokuhlanganyela indololwane
Izintwala pubic. Ngoba wona ngakho abathandanga ngabantu?
Toxoplasmosis: Izimpawu ezinganeni. Ukuxilongwa kanye nokwelashwa of toxoplasmosis
Uphilisa for hemorrhoids ezingabantu: kwezokwelapha zanamuhla futhi amakhambi abantu
Okudla "Ladder: superpohudenie" - ukususa isisindo okweqile
David Niven: amabhayisikobho, biography
Kanjani lokungeniswa heater ngezandla zakho siqu?
Esiphundu futhi unempilo cranberry: Amalungiselelo ebusika
I ejikeni Spee - Iyini?
UGabriela Sari - actress, umculi. Impumelelo ochungechungeni "Wild Angel"
Isigqoko ngoba snowmobile Modular: Izibuyekezo
Yohlobo lweToyota Corolla 2013 ukubuyekeza vtomobilya
Amazambane "Sineglazka": incazelo ezihlukahlukene, ukunakekelwa, izici kanye nokubuyekeza
Bentonite - kuyini? enza bentonite, ukusetshenziswa
Indlela ukutshala rose engadini ekhaya